Ekoatera - Fitantanana ny jono | Reef Resilience
Ekoatera - Fitantanana ny jono
Fanimbana Paradisa: ny fivoaran'ny fampiharana ny Galapagos
Ny Valan-javaboarin'ny Galapagos (GMR) no valan-javaboahary lehibe indrindra fahefatra indrindra eran-tany amin'ny manodidina ny 133,000 km2. Ny GMR dia novolavolaina tamin'ny 1998 tamin'ny alàlan'ny Lalàna manokana momba ny fampandrosoana maharitra sy ny fiarovana ny Faritra Galapagos (LOREG) ary manitatra kilaometatra 40 eny amin'ny sisintany manodidina ny nosy. Ny nosy dia manana ny toetrany ara-jeografika sy ara-jeolojia ary eo anelanelan'ny tendron'ny ranomasimbe efatra. Izany dia nanampy tamin'ny famokarana ny karazam-bika miavaka izay hita any androany, ka nahatonga azy ireo ho nalaza ho 'laboratoan'ny evolisiona velona' teo amin'ireo mpahay siansa sy mpikaroka. Ankehitriny, ny fiarahan'ny fizahantany fizahan-tany sy ny indostrian'ny jono, izay manohana ny fiveloman'ireo mponina ao amin'ny nosy, dia mandrahona ny fisoratana sy ny fahasamihafany.
Ny toeram-piarovana Galapagos an-dranomasina sy ny faritry ny fizarana ara-toekarena. Sary © Google Earth
Ny haben'ilay tahirin-dranomasina, mponina iray feno mponina 28,000, ary ny mpizahatany 200,000 isan-taona dia mametraka fanamby marobe amin'ny fiarovana ny vondronosy. Ny fiarovana voalohany sy ny fitantanana eo amin'ny fitantanana ny tontolo iainana an-dranomasina ao Galapagos dia asehon'ireto manaraka ireto:
Ny sehatry ny fanjonoana maniry izay mipetraka ao anatin'ny vondronosy dia ahitana mpanjono 1,000 sy ny sambo 355. Ny fanjonoana manan-danja dia ahitana ny gomelika, kôkômbia, alika, ary karazana fotsy maro.
Ny sambo mpitondra fiaramanidina nasionaly no goavam-be lehibe indrindra any Pasifika Atsimo. Ny fanjonoana faran'izay manan-danja dia ahitana tonimaso sy fotsy.
Sambo mpanjono iraisam-pirenena no avy any Kolombia sy Costa Rica. Ny fanjonoana manan-danja dia ahitana tonimaso, antsantsa ary fotsy.
Ny tobim-piaramanidina 85 ary mihoatra ny 20 andro fitsidihana sy sambo mpizaha-tany dia mivezivezy manerana ny vondronosy.
Entana isan-kerinandro ny serivisy ho an'ny karbaona sy solika.
Fito ambin'ny folo taona taorian'ny nanorenana ny GMR, ny fandrosoana goavana amin'ny fitsipika momba ny fisarihana sy ny fampihorohoroana dia natao tamin'ny resaka fitsangantsanganana, ny fotodrafitrasa, ny fitaovan'ny olombelona, ​​ary ny fampandrosoana ara-panjakana. Ny fitantanana ny harena an-dranomasina, na izany aza, dia mbola olana saro-bahana, indrindra noho ny fanerena tsy tapaka napetraka amin'ny loharano sy ny filàn'ny fandrindrana teknika sy ny olombelona amin'ny fikojakojana ny fiaramanidina.
WildAid, miara-miasa amin'ny mpiara-miasa, dia miasa mba hahatonga ny GMR ho iray amin'ireo faritra voaaro tsara indrindra any amin'ny tontolo an-dalam-pandrosoana. Ny tetikasan-dry zareo dia mikendry ny hampiato ny fanjonoana tsy ara-dalàna ary hanatsara ny fahaiza-manaon'ny fitantanana ny National Park Service (GNPS). Ny fitantanana mahomby ny GMR dia tsy afaka mandresy raha tsy mahomby ny fampiharana ny lalàna sy ny fanarahan-dalàna. Tsy misy fomba fijery "volombolon'ny volafotsy" amin'ny fanaraha-maso. Ny WildAid dia nanamafy ny fahaizan'ny fanaraha-maso sy ny fanararaotan'ny GNPS amin'ny fampidirana ireo rafitra teknolojia avo lenta nefa manome antoka ny fahaiza-manaon'ny haitao hanelingelina ny mpanjono tsy ara-dalàna rehefa voafaritra amin'ny rafitra. Ny tanjon'izy ireo dia ny fametrahana ny rafitr'ity rafitra ity sy ny fametrahana fomba amam-panao fototra ho an'ny sampana rehetra mifandraika amin'ny fifehezana sy ny fahamalinana amin'ny GMR.
Patrol Asset Accreditation
Talohan'ny 1998 sy ny famoahana ny LOREG, ny sampan-draharahan'ny National Park Galapagos (GNPS) dia tsy mifantoka afa-tsy amin'ny fitantanana ny faritra ety an-tany ary tsy manana fahafahana hampihatra ny ranomasina. Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa talohan'ny LOREG, ny fiarandalambon'ny lozam-piaramanidina Ekoateriana dia nahazo fahafahana tanteraka tamin'ny vondronosy, raha ny an'ny 1998 dia tsy nanana fahafahana miditra amin'ny iray amin'ireo toerana fanjonoana fototra intsony izy ireo. Hatramin'ny fananganana ny GMR ao 1998, ny ezaka fampiharana voalohany dia mifantoka amin'ny fanangonana sambo sy fitaovana fitsaboana, ny fananganana biraon'ny harena an-dranomasina, ary ny fampiofanana ireo mpiompy amoron-dranomasina. Tamin'ny 2005, ny GNPS dia nanolotra sy nahazo fanampiana maro ho an'ny lisitr'ireo zava-maniry mahavariana: fantsom-paty 11, toerana iray mitandavana, tany ambanin'ny tany, ary fiaramanidina fiaramanidina efatra. Ny fahaizan'ny fitiliana ny GNPS dia tsy afaka nanohy ny dingam-panangonam-bola, ary tamin'ny 2006 ny ankamaroan'ny sambo dia diso tafahoatra. Ny fanangonam-bola no nahatonga ny mpiasa, ny solika, ny solika, ary ny isam-batan'olona ilaina mba hihazonana ny asa. Mba hiatrehana ny sasantsasany amin'ireo olana ireo, ny WildAid sy ny Conservation International (CI) dia nifantoka tamin'ny fampivelarana ny fahaiza-miasa eo an-toerana ho an'ny fiaramanidina GNPS mba hiantohana ny fisorohana tsy mitsahatra ny GMR sy ny famatsiana teknolojia mba hampihenana ny vidin'ny fanaraha-maso. Ohatra avy amin'ireo teknolojia ampiasaina eto ambany.
Safidy Teknolojia ho an'ny Fanaraha-maso sy Fandefasana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoRafitra fanarahamaso miara-miasa mitaky transceivers toerana mavitrika amin'ny sambo. Ny hafatra amin'ny toerana dia misy fampahalalana toy ny: anaran'ny sambo, latitude, longitude, course, ary hafainganana. Ny lalàna mifehy manokana dia tsy maintsy apetraka mba hanerena ny tompona sambo hividy sy hampihetsika ireo transceiver an-tsambo. Raha tapaka ny fitaovana apetraka, tsy hahita ny toeran'ny sambo ny gara sy ny foibe fanaraha-maso. Satria mirona hanala ny transceiver ny mpandika lalàna, ny lalàna dia tsy maintsy mihevitra ny sazy henjana ho an'ny fanodikodinam-bola ataon'ny mpandray anjara. Ny lesoka lehibe indrindra amin'ireo rafitra ireo dia ny tsy hahitan'izy ireo mpanjono avy amin'ny faritra hafa na firenena izay tsy mampiasa transceiver.
Ao amin'ny 2009, WildAid dia nanampy tamin'ny fametrahana rafitra fanaraha-maso Satellite Vessel System (SVMS) hanara-maso ny toerana marina sy ny hafainganan'ireo sambo lehibe mandehandeha ao anatin'ny tahiry isaky ny adiny iray. Tamin'ny taona voalohany, voasambotra 32 tamin'ny fampiasana SVMS sy ny Rapid Response Patrol Fleet. Sary © WildAid
Fandaharam-potoan'ny Fanaraha-maso ny Vessel (VMS) ho fanaraha-maso ny fiaramanidina ara-barotra nasionaly. WildAid sy ny mpiara-miasa dia niara-niasa tamin'ny manampahefana Navy sy ny tontolo iainana mba hamoaka lalàna iray tamin'ny Martsa 2009 izay nitaky ny sambo rehetra mihoatra ny 20 GT hampiasa VMS. Ny sazy henjana dia noraisina ho an'ny famindrana ny mpandika lalàna ary ny mpandika lalàna dia tsy manana fidirana amin'ny solika. Ny mari-pamantarana fanovan'ny VMS dia napetraka isaky ny ora ho an'ny sambo Ekoatoriana, raha toa kosa ny 6 ora iraisam-pirenen'ny International Organization (IMO). Ireo tompon'ny sambo dia takiana handoavana ny asa fanompoana isam-bolana. Ity dia fe-potoana 3-taona natomboka tao 2006, ary ny Navy sy ny GNPS dia nizara ny fidirana amin'ny angon-drakitra ary nahazo ny foibe fanaraha-maso hanara-maso ny hetsi-panoherana.
Autism Identification Systems (AIS) ho an'ny fanaraha-maso ny sambo ara-barotra sy ny artisanal. Ny fotodrafitrasa any Shores izay manohana ny AIS dia nomena sy napetraka manerana ny aripàlan'i 2012; Na dia izany aza, dia tsy dia nahomby loatra izy io satria tsy misy lalàna mandràra ny fampiasana ny mpanome tolotra AIS.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoRafitra fanaraha-maso tsy miankina dia ny safidy tsara indrindra amin'ny fisintonana sambo izay manatanteraka fikasana tsy ara-dalàna amin'ny faritra ara-jeografika na amin'ny tsy fisian'ny rafitra ifampiresahana. Ny rafitra dia matetika nohavaozina mba hametrahana ny tsy fahampian'ny teknolojia manokana amin'ny fampiasana ny herin'ny hafa. Ohatra, ny rafi-pandrefesana matetika dia manampy ny rafitra AIS mba hahitana ireo sambo vahiny na fanaka izay nanala tanteraka ny mpitaiza azy.
Fiaramanidina Patrol ho an'ny fanaraha-maso ny sambo mpamboly sy mpanakanto. Noho ny habetsaky ny GMR, ny GNPS dia nanao fiaramanidina efatra amin'ny seza miaraka amin'ny fanampian'ny USAID. Raha nomena ny saram-pitateran'ny sambo, ny fiaramanidina patrol dia noheverina ho fitaovana fanaraha-maso tsara indrindra; Na izany aza, dia lasa lafo be izy io rehefa mandeha ny fotoana, satria ny ampahany rehetra dia tsy maintsy entina ary ny fiaramanidina dia mitaky fiantohana, solika manokana, mpanamboatra ny fotoana feno ary pilotina. Sarotra ihany koa izany noho ny nanakatonana ilay mpanamboatra fiaramanidina tao 2009.
Fanaraha-maso ho amin'ny fanaraha-maso ny sehatry ny varotra Artisanal sy ny Lapoaly. Noho ny fisian'ireo mpanjono maro be ireo dia mifantoka amin'ny sehatra voafaritra manokana, ny GNPS dia manangana lahatsoratra mailo amin'ny sehatra fototra izay tena mafy indrindra ny fanjonoana. Ny fisian'ny fiara ara-batana amin'ny mpandeha an-tanety amin'ny lozam-pifamoivoizana sy radio radiônika VHF no rafitra mahomby indrindra ho an'ny faritra ara-jeografika.
Lahatsary ho an'ny Video mahery sy radar ho an'ny fanaraha-maso ny asan'ny sambo rehetra ao amin'ny seranana. WildAid, World Wildlife Fund (WWF), ary CI dia nahavita ny fametrahana ireo fitaovana fanaraha-maso ny seranan-tsambo sy fakan-tsary amin'ny seranana manan-danja telo amin'ny Novambra 2013. Ireo fitaovana fanampiny dia fitaovana tena ilaina ho an'ireo manampahefana GNPS sy ny mpiambina amin'ny morontsiraka amin'ny fampiharana ny lalàna momba ny fanjonoana, fizahan-tany ary ny sambo ara-tsakafo an-dranomasina. Ny fakan-tsary dia tena nanampy tokoa ny fanafihana toy ny fanondranana solika, fanjonoana tsy ara-dalàna, sambo mpizahantany mandalo, ary ny fanadiovana trondro any amin'ny seranana. Na ny kapitenin'ny seranan-tsambo sy ny foibem-pitantanana GNPS dia miara-miasa amin'ny zodiaka voatokana ao amin'ny birao, izay afaka mamaly haingana toy ny fanitsakitsahana. Ny radar dia tena ilaina tokoa amin'ny fanondroana ny sambo miditra sy mamela ireo baskety amin'ny fanangonana tsy ara-dalàna ary miaraka amin'ny famindrana toerana ny famoahana tsy tapaka.
Fitsaboana ara-dalàna momba ny fampitaovana sy ny fitantanana ny sambo
WildAid sy ny mpiara-miasa dia mikendry ny hampandamina ny asan'ireny rafitra ireny ary mametraka fomba amam-panao fototra ho an'ny sampana rehetra mifandraika amin'ny fifehezana sy fahamalinana ny GMR. Tena zava-dehibe izany satria ny teknôlôjia sy ny rafitra dia tsy misy afa-tsy ireo izay nampiofanina hampiasa sy hitazonana azy ireo. Ny asa atao dia ahitana:
Manaparitaka toeram-pitsaboana, fanaraha-maso ary fisorohana fiara fitanterana serivisy amin'ny GNPS Marine Resource Department.
Fanomezana fanohanana ara-teknika amin'ny Departemanta IT an'ny GNPS amin'ny fampivelarana ny rindrambaiko mba hampisy rafitra ny hetsika fanaraha-maso ny sehatra rehetra ary hanome ny vaovao any amin'ny Departments. Ny rindrankajy dia mamoaka tatitra momba ny ora fahita amin'ny sambo, ny ora an-tselika, ny lalan-draharaha, ny finday, ny sombin-tsakafo takiana, ary ny fanaraha-maso ny baikon'ny fikarakarana.
Fametrahana loharanon-kevitra momba ny toetry ny fiaramanidina patrouillé izay misy ny fandaniana sy ny fikojakojana. Mifototra amin'io fampahalalam-baovao io, ny GNPS dia nametraka laharam-pahamehana ny tetikadim-pikarakarena, ary nanatontosa fanaraha-maso ara-teknika fanamarinana fahatelo ho an'ny fanaraha-maso ny famonoana ny plana.
Fandaharam-pianarana fanao isan-taona momba ny toeram-piarovana sy ny fikojakojana elektrônika ho an'ny mpiasa miasa amin'ny sambo amin'ny serivisy.
Ny fampivoarana ny protocole ho an'ny fizarana ny fizotry ny fitsarana momba ny heloka bevava sy ny lalàm-panorenana rehetra ataon'ny governemanta GNPS amin'ny alàlan'ny dingana rehetra mba handaminana ny raharaha mikasika ny raharaha ara-panjakana sy ny heloka bevava. Noho ny fampivoarana ny toekarena avo lenta amin'ny GNPS, ny antontan-kevitra sy ny protocols dia manan-danja amin'ny fanohanana ny fitohizan'ny fitazonana sy ny fitantanana ny lalàna.
Ny GNPS dia manana ny iray amin'ireo rafitra fanarahamaso elektronika manjavozavo indrindra ao amin'ny tontolo an-dalam-pandrosoana ary ny fiarandalamby fanjonoana haingana amin'ny fanjonoana ny mpanjono tsy ara-dalàna rehefa voafaritra amin'ny rafitra. Na dia izany aza, ny fanatsarana dia tsy nilahatra. Raha nomena ny politikan'ny GNPS, dia naverina niverina ny vanim-potoanan'ny fandrosoana noho ny fitantanana ny tale sy ny mpiara-miasa. Na dia teo aza ireo tsy fahampiana ireo, dia nihatsara ny fampiharana ny GMR. Araka ny aseho amin'ny sarintany, ny ankamaroan'ny fanangonam-barotra ara-barotra dia manaja ny valan-javaboary 40 naotical miles. Tsy misy ny fanarahan-dalàna feno, na izany aza, satria ireo mpanjono ara-barotra sasany dia manohitra ny fanaraha-maso ny zanabolana amin'ny alàlan'ny fantsona vovo-pirafitrasa madinika mba hahafahan'izy ireo miditra amin'ny GMR tsy hita. Na inona na inona fiovana ara-teknolojika, ilaina hatrany ny fanaka hidirana an-tsokosoko. WildAid sy mpiara-miasa dia manohy miara-miasa amin'ny GNPS hanatsarana ny fahavitan'ny sambo, hanatsara ny famatsian-tsokajiny, ary hampiditra ny fanoloran-kevitry ny key ho an'ny asa mahomby. Amin'ny farany, ny GNPS dia hanana rafitra matanjaka sy olona manam-pahaizana manokana mba hamitana programa fanaraha-maso mahomby izay mitaky ny fanangonana maharitra ny harena an-dranomasina.
Sarin'ny marika 30 Andron'ny Fotoam-piarovana Galapagos toy ny hita avy amin'ny GNPS Control Center. Sary © GNPS
Ny finiavana ara-politika, indrindra amin'ny fampiharana ny lalàna sy ny fitsipika ataon'ny manampahefana, no tena manan-danja indrindra amin'ny fampiharana ny lalàna sy ny fitantanana MPA. Ny sitrapo ara-politika dia mety ho avy amin'ny loharano maro, toy ny olom-panjakana, mpanao lalàna, ONG, ny manampahefana ary ireo mpiray antoka hafa.
Raha tsy misy lalàna mifehy, ny teknolojia mifandraika amin'ny teknolojia dia tsy mahomby amin'ny fanarahamaso ny sambo. Ankoatr'izany, tokony hisy sazy / fanentanana hampiasana araka ny tokony ho izy sy hisorohana ny fanavahana.
Ny fividianana fananana rehetra dia tsy maintsy entina am-perinasa ary tsy omen'ny mpanolotra. Ny GNPS dia nahazo fantsom-piraketana sy fananana hafa avy amin'ireo mpamatsy izay nanana fikasana tsara indrindra; Na izany aza anefa, ny fikojakojana azy ireo dia nahitana fandanindaniam-bola ary nahatonga ny fandaniana ny teti-bola.
Teknika dia fitaovana fotsiny. Ny fampiasam-bola sy ny fitantanana ny olona dia tsy maintsy ampiasaina mba hikarakarana sy hikojakojana ny rafitra ary hampihatra ny lalàna sy fitsipika amin'ny farany.
Raha raisina ny tetibola avo lenta, ny famolavolana ny fanaraha-mason'ny serivisy ho an'ny drafitra manan-kery eo amin'ny sehatry ny seranan-tsambo dia manan-danja amin'ny fiantohana ny fitohizan'ny fisorohana sy ny fisorohana ny fandikana tsy ara-dalàna ny fitsipika sy fitsipika.
Ny famolavolana fepetra tsotra toy ny sora-bavon-tsambo, lisansy, ary ny mpanampy asa dia manampy amin'ny fanamoram-piofanana mialoha sy amin'ny fanamboarana fanamboarana sarany.
Ny fanatrehana ara-batana amin'ny fahefana (sambo ao anaty rano) dia mbola iray amin'ireo fanariana tsara indrindra amin'ny fanjonoana tsy ara-dalàna ao amin'ny GMR.
Tahiry ho an'ny Wildlife and Sea Shepherd: $ 2.5M
Galapagos National Service (GNPS)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoWildAid Marine Protection
Ity fanadihadiana ity dia nomen'ny WildAid. Raha mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa: Marcel Bigue ao amin'ny bigue@wildaid.orgmamorona mailaka vaovao or misokatra amin'ny varavarankely vaovaokitiho eto.